Ngaphakathi, manicure kanye pedicure amasevisi iphuzu ezimbili ezahlukene ohlwini intengo: Floor sula «Shellac» futhi amboze sula nail gel. Ngoba intengo inqubo ngokuvamile ezahlukene kakhulu. Kungani? I Shellac lihlukile sula ijeli, uma empeleni, kungcono ababili ukwaziswa okufanayo? Ngakho, umehluko sisekhona?
Umkhiqizi, ubuchwepheshe Iphalethi
Ake sibheke amalebula imikhiqizo ezimbili. Shellac senziwa abadumile inkampani American. Lena ijeli lacquer kuqala, okuyinto waqhubeka ukudayiswa. izindleko zalo kuphezulu kakhulu, futhi ngenxa yalokho izinzipho enamathela bona kuyohlale ezibizayo. Gel varnishes nezinye izinkampani ohlelweni lokusetshenziswa kwemali kakhulu salokhu. Noma kunjalo, kukhona esincintisana kuseduze Shellac. It - Gelish. Eqinisweni, kungcono zonke izinto ezifanayo, usanda kwenza Japanese okhathalelayo. Liqinisekisa umakhi ukuthi gelish ongenziwa ku izipikili cishe kwenyanga, ngaphandle kokubandlulula manicure. Okusho ukuthi, lento oqhubeka izinzipho isikhathi eside kunaleso Shellac. Uhluka ijeli ukuvenisha nezinye izinkampani umkhiqizo umbuzo futhi ivolumu. Ngakho, Shellac is zahlanganiswa ku izitsha eziyisikhombisa 7 ml gelish - 15 ml, ngaphezulu gel ezinengilazi - ne 12 ml (kaningi).
izinkampani kwemali ukunikela izimpahla letingemasayizi lahlukene, kanye umbala Palette. Shellac ukuqhathaniswa neminye gel nail. Umehluko phakathi kwabo kukhona lokhu okulandelayo:
imibala ehlukene (kusuka Gelish kubo eminyakeni engaphezu kwekhulu, e Shellac - imibala 49 kuphela, ezinye izinkampani ozama ukuthatha inombolo);
Isimanga siwukuthi kodwa isabelomali-ijeli ezinengilazi babe waqopha eshalofini yokuphila. Ngeshwa, ngezinye izikhathi ithinta izinga. Ngokusho ngempendulo amaklayenti nail nokucwala, abanye analogue lemikhiqizo owaziwa amanga kubi ku izinzipho, anamathelane, sidilike bese crack ngisho ngaphandle kwesizathu. Ingasaphathwa iqiniso ukuthi ubambe esingaphansi Shellac.
It ihlukile ukuvenisha gel nezinye izinkampani okunikezwe yokuthi ukuthi akukhona njalo edingekayo zapilivaem nail ipuleti ngaphansi kwalo. CND Ochwepheshe banakekele labo ngokwemvelo ababuthakathaka futhi exfoliating izipikili. Kukhona uketshezi ekhethekile umugqa imikhiqizo isicelo Shellac. Akhipha bucwebezele, okunamafutha ifilimu futhi kwenza kobuso mat nail. Khona-ke badinga kuphela isicelo ngaphansi base Shellac. Okungukuthi, izinzipho bangaveziwe ukungqubuzana asebenzayo sawing, okuyinto elondoloza isakhiwo sabo.
Nokho, naphezu eshiwo izici izinto ezifana Shellac kanye gel nail, umehluko phakathi kwabo akuyona likhulu kakhulu. Lapho besebenza endlini, okuholela contact njalo ngamanzi kanye insipho, ayikho into ngeke lihlale isikhathi eside. Maximum - amasonto amabili. Bese umbala usuqalile ayizalayo, wathi Ngifuna okuhlukahlukene.
Amantombazane amaningi uyinaka endleleni esigqokwa noma yenziwe ngohlobo oluhlukile. I Shellac lihlukile ukuvenisha gel kulesi simo? Yebo, akukho lutho. Ngo ukwakheka, cishe ukwaziswa okufanayo. amakhemikhali yaseNdlunkulu esetshenziswa nsuku zonke, okufanayo "owadlayo" kukhanya - ukuthi Shellac ukuthi izimbangi zayo. Kufanele ngikhokhe esingeziwe sha? Kuyinto, uma izinzipho ababuthakathaka, ziyaqothuka futhi exfoliating. I kancane babona round ku ebusweni elingaphandle, ngcono. Shellac kwisicelo ivumela ukuxhumana ngamasaha, futhi ngaleyo ndlela kulondoloza yemvelo ukukhula nail. Nakuba kungekho umonakalo kuyoba ukuhlola kwi izinto ezimbalwa ezahlukahlukene, ekutholeni ngempela engcono. Umuntu ihlukile zezinkozi nezinzipho zakhe kakhulu. Omunye okahle Shellac, abanye - gelish nezinye izimbangi.
Ancient Egypt: ebaziwe nezobuciko zezwe lasendulo deku isiko
Kanjani ukukhetha ubhaka wamathambo okwesikhathi ibanga lokuqala